“Signing Ceremony for China-Myanmar Joint Laboratory of Radar, Satellite Communication and Microelectronics”
“Training for China-Myanmar Joint Laboratory of Radar and Satellite Communication, Beijing, China, 2015”
“Opening Ceremony of Technical Knowledge Sharing Program on Satellite, Radar & Microelectronics at DRI (21-12-2015 to 24-12-2015)”
“Technical Training from BIRM Experts on Satellite Communication Ground Station Platform and Microelectronics Technology Platform at DRI (14-7-2016 to 27-7-2016)”
“Radar Technology Training in Beijing, China, 2016 (1-9-2016 to 28-9-2016)”
Giving Lecture and practical skill to the students from Technological Universities coming to DRI according to Technical knowledge Sharing, Internship Program and Field Trip program in 2017
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး)၊ ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) မှ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသုတေသနဌာနသို့ Field Trip လာရောက်ကြသော ကျောင်းသား/သူ များ အား Radar, Satellite, Microelectronics နည်းပညာဆိုင်ရာများကို သက်ဆိုင်ရာ Lab ခန်းများတွင် စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပြသပေးခြင်း
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသူများ ကို Satellite, Radar and Microelectronic Laboratory များတွင် Video Coding, FPGA and Digital Design, နှင့် Radar technology များအား Internship (၂) လ စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးခြင်း
The 5th ASEAN-KOREA Engineering Forum and Exhibition တွင် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ သုတေသနဌာန၏သုတေသန Project များသွားရောက်ပြသခြင်း (၂၀၁၇)
Project show activity on The 5th ASEAN-KOREA Engineering Forum and Exhibition by Electronic Technology Research Department in 2017
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသုတေသနဌာန သို့ လာရောက်သည့်တရုတ်သံရုံးမှ အရာရှိကြီးများ ကို China MOST ၏ အကူအညီဖြင့် Satellite, Radar and Microelectronic Laboratory များတည်ထောင်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြသခြင်း
Mr.Su Zhe (first Secretary of China Embassy) visit to the Satellite Communication, Microelectronic and Radar Simulation Platform Laboratory and discussion concerned the implementation of Joint laboratories with Dr.Zaw Min Naing (Deputy Director General, DRI)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၉-၂၀)ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပမည့် “အာဆီယံ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ သုတေသနဖိုရမ်”(ASEAN-STI Conference) ကျင်းပမှုမှတ်တမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသုတေသနမှ သုတေသနစာတမ်းတက်ရောက်ဖတ်ကြားခြင်း
Paper submit and presentation activity on ASEAN-STI Conference by Electronic Technology Research Department in 2017
(၁၈-၇-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနတွင်ဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့သော “Technical Training on CLMR Radar Simulation Platform”ရေဒါအသုံးပြုမှုနည်းပညာသင်တန်း၏မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
“Technical Training on CLMR Radar Simulation Platform” held in DRI on 18th July 2018
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းခိုင်မိုးမှ ရေဒါအသုံးပြုမှုနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်ပွဲတင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
Giving Opening Speech by U Win Khaing Moe, Director General of DRI
BIRM မှ Mr. Du Xin (Vice Director) မှ CLMR Radar Simulation Platform သင်တန်း အကြောင်းအရာများရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းMr. Du Xin (Vice Director of BIRM) Explain about the training on CLMR Radar Simulation Platform
BIRM မှ Mr. Duxin မှ Antenna, Transmission/Receiving Process ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများစာတွေ့လက်တွေ့ပို့ချနေခြင်းMr. Duxin lectured about Antenna, Transmission/Receiving Process
BIRM မှ Mr. Duxin မှ Antenna Servo Control ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ စာတွေ့လက်တွေ့ပို့ချနေခြင်းMr. Duxin lectured about Antenna Servo Control
BIRM မှ Mr. Duxin မှ System Combol ၏ Frequency Synchronizing ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများစာတွေ့လက်တွေ့ပို့ချနေခြင်း
Mr. Duxin lectured about System Combo Frequency Synchronizing
BIRM မှ Mr. Duxin မှ Combol ၏ Transceiver နှင့် Power Amplifier ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများစာတွေ့လက်တွေ့ပို့ချနေခြင်းBIRM မှ Mr. Duxin lectured about Transceiver and Power Amplifier Combo
BIRM မှ Mr. Duxin မှ Display and Control Operation process ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများစာတွေ့လက်တွေ့ပို့ချနေခြင်း
Mr. Duxin lectured about Display and Control Operation process
သင်တန်းသားသင်တန်းသူများမှ အဖွဲလိုက် Operation procedure and Simulation Process ဆိုင်ရာများလက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေခြင်းPractical Experiments of Operation procedure and Simulation Process by trainees
သင်တန်းဆင်းပွဲ အဖွင့်အမှာစကားနှင့် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း
Dr.Zaw Min Naing (Deputy Director General) is giving closing speech of the training
China Embassy မှ Mr.Su Zhe (first Secretary) က သင်တန်းဆင်းအောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများအားမှတ်ချက်ပြုအမှာစကား
Mr.Su Zhe (first Secretary of China Embassy) is giving remark speech
BIRM မှ Mrs.Qin Lihua (Deputy Director General) နှင့် သင်တန်းနည်းပြဆရာများမှ သင်တန်းဆင်း Certificate များပေးအပ်ခြင်း
Mrs.Qin Lihua (Deputy Director General of BIRM) is giving certificate of completion of the training
DRI မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မင်းနိုင်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများမှ BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သင်တန်းနည်းပြဆရာများအား အမှတ်တရလက်ဆောက်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်း
Giving Remembrance presents by DRI
China Embassy မှ Mr.Su Zhe (first Secretary) မှ Satellite Communication, Microelectronic နှင့် Radar Simulation Platform Laboratory များအား ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း
Mr.Su Zhe (first Secretary of China Embassy) visit to the Satellite Communication, Microelectronic and Radar Simulation Platform Laboratory
(၃၀-၇-၂၀၁၈) ရက်နေ့နေ့လည် (ဝ၁:ဝဝ) တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော X band phased array weather radar ရာသီဥတုတိုင်းတာရေး ရေဒါစနစ်တခုကို သုတေသနပြုလုပ် တည်ဆောက်ခြင်း ပူးပေါင်းသုတေသနဆောင်ရွက်မှုအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မှ နားလည်မှု
စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
BIRM မှ Mrs. Qin Lihua မှ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းအကြောင်း
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန နှင့် BIRM တို့အကြား X band Phased Array Weather Radar Project ပူးတွဲသုတေသနလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နားလည်မှုစာချွှန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန နှင့် BIRM တို့ အကြား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခြင်း
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန နှင့် BIRM တို့အကြား X band Phased Array Weather Radar Project ပူးတွဲသုတေသနလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နားလည်မှုစာချွှန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အထိမ်းအမှတ် စုပေါင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း
X band Phased Array Weather Radar Project ပူးတွဲသုတေသနလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (Meeting Minutes) ပြုလုပ်ခြင်း
(၃၁-၇-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည် ဌာနခွဲ) သို့ BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်များ လေ့လာရေးသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
The delegation from BIRM visited to the Department of Meteorology and Hydrology (lower Myanmar Branch) in July 2018.
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲ) မှ အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးရဲထွဋ်မှ BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ရှိအသုံးပြုနေသော မိုလေဝသရေဒါစနစ်အား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
Presentation about Weather radar system currently used in DMH.
BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော S-band Weather Radar System အား ကြည့်ရှု့လေ့လာခြင်း
Study tour on S-band Weather Radar System with the delegation of BIRM
BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(အောက်မြန်မာပြည်) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိုးလေဝသရေဒါစနစ်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
The delegation of BIRM discussed about weather radar system with the director of Ministry of Meteorology and Hydrology (Lower Myanmar)
BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(အောက်မြန်မာပြည်) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ရီရီငြိမ်း နှင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း
BIRM မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(အောက်မြန်မာပြည်) မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း
“Radar Technology Training in Beijing, China, 2018 (25-8-2018 to 26-9-2018)”
Beijing Institute of Radio Measurement (BIRM) မှ ကြိုဆိုခြင်း ဖွင့်ပွဲအမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
Principles and Techniques of Radar System ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သင်ကြားပို့ချခဲ့သော
Mr. Che Renquan နှင့်သင်တန်းအပြီးအမှတ်တရဓာတ်ပုံ
Servo System အကြောင်းသင်ကြားပို့ချခဲ့သော Mr. Xu Chulong နှင့် သင်တန်းအပြီးအမှတ်တရဓာတ်ပုံ
Antenna Design ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများ သင်ကြားပို့ချပေးသော
Ms.Sun Wenling နှင့်အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
CMR radar servo system ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများ သင်ကြားပို့ချပေးသော
Mr. Xu Chulong နှင့်အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
Radar Receiver အကြောင်းသင်ကြားပေးသော Mr. Zhao Qi Min နှင့် အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
Frequency Synthesizer အကြောင်းသင်ကြားပေးသော Mr. Zhao Qi Min နှင့် အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
Transmitter အကြောင်းသင်ကြားပေးသော Ms.Wang Weixia နှင့်အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ